Abenzi be-AP yangaphakathi kunye nababoneleli - i-china yangaphakathi ye-AP factory
I-WL8200-X10 yangaphakathi ye-802.11ax iWi-Fi 6 ye-Triple Band Enterprise AP
I-WL8200-X10 sisizukulwana esilandelayo se-Wi-Fi 6 yeshishini elisebenza ngokugqibeleleyo kwi-Wi-Fi AP (Indawo yokuFikelela) ekhutshwe yiDCN, inokuxhasa i-802.11ax kwaye ibonelele ngoqhagamshelo lwe-uplink ye-2.5G Ethernet. Ngokusebenza okuphezulu kwe-6.82Gbps yokufikelela kwi-bandwidth, i-WL8200-X10 kulindeleke ukuba ibe nokuxhuma okuphezulu kwabaxhasi ukuhambisa amava angcono omsebenzisi we-Wi-Fi. Ngomdibaniso okhokelela kumzi-mveliso kathathu wemisinga yendawo, i-WL8200-X10 lukhetho olufanelekileyo kwimeko yokuxinana okuphezulu kunye ne-bandwidth ephezulu yeemeko ezinje ngesicelo se-AR / VR, i-4K ...
I-WL8200-I3 (R2) yangaphakathi ye-802.11ac Wave2 ye-Triple Band Enterprise AP
I-DCN WL8200-I3 (R2.0) lishishini elisebenza ngokusezingeni eliphezulu kwi-Wi-Fi AP (Indawo yokuFikelela), enokuxhasa i-802.11ac Wave2 kunye nokubonelela ngoqhakamshelwano lwe-Gigabit Ethernet uplink. Ngokusebenza okuphezulu kwe-2.9Gbps ​​yokufikelela kumgama wendlela, i-WL8200-I3 (R2.0) kulindeleke ukuba ibe nokuxhuma okuphezulu kwabaxhasi ukuhambisa amava omsebenzisi we-Wi-Fi angcono. Inika amandla apheleleyo enkonzo kunye neempawu ezinje ngokuthunyelwa ngokulula, ukufunyanwa okuzenzekelayo kwe-AC kunye noqwalaselo, ukuthembeka okuphezulu, ukhuseleko oluphezulu, kunye nolawulo lwexesha lokwenyani ...
I-WL8200-I2 (R2) yangaphakathi 802.11ac Wave2 Dual Band Enterprise AP
I-DCN WL8200-I2 (R2.0) yinkampani ephezulu yokusebenza kwe-Wi-Fi AP. Ixhasa umgangatho we-802.11ac Wave2 kwaye ibonelela ngeGigabit Ethernet ephezulu yokunxibelelana. Ubuninzi bebhendi yokufikelela bunokufikelela kwi-1167Mbps. Inika amandla apheleleyo enkonzo kunye neempawu ezinje ngokuthunyelwa ngokulula, ukufunyanwa okuzenzekelayo kwe-AC kunye noqwalaselo, ukuthembeka okuphezulu, ukhuseleko oluphezulu, kunye nolawulo lwexesha langempela kunye nolondolozo. I-WL8200-I2 ilungele amashishini, urhulumente kunye neemarike zokwamkela iindwendwe. Iimpawu eziphambili kunye noHi ...